Jr. Sales & Operation | Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd. ﻿
• အသက် ( ၂၀ နှစ်၂၅ မှ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• အရောင်းပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
• ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြေပြစ်၍ စကားပြောချိုသာယဉ်ကျေးရမည်။
• မိမိ၏ Company ၏ Brand အား ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
• Product ပစ္စည်းများအား Customer များကိုသေချာစွာရှင်းပြနိုင်ရမည်။
Jr. Sales & Operation Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon